जन्मेको २४ घण्टा भित्र शिशु किन रुनै पर्छ ? नरोए के हुन्छ ? हेर्नुहोस ! – " सुलभ खबर "
जन्मेको २४ घण्टा भित्र शिशु किन रुनै पर्छ ? नरोए के हुन्छ ? हेर्नुहोस !
जब बच्चा जन्मन्छ, यो संसारमा आउने बित्तिकै ऊ ठूलो स्वरमा रुन्छ। उसको यो रुवाई नै ऊ जन्मेको संकेत हो। तर कहिलेकाँही बच्चाहरु जन्म पछि रुने गर्दैनन्, जुन् कुरा सामान्य हो। तर के जन्म लिए पछि बच्चा रुनु आवश्यक छ? यस प्रश्नको उत्तर प्रायः सबै आमाबाबुलाई थाहा होला , तर के तपाईंलाई थाहा छ बच्चा जन्मेको २४ घण्टा भित्र पहिलो पटक रुनु किन महत्त्वपूर्ण छ? यो कुरा थाहा पाउँनुहोस् कि नवजात शिशुको लागि जन्म लिँदा रुनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
जन्म लिएपछि बच्चा रुनु किन छ त आवश्यक?
जब बच्चा जन्मन्छ,ऊ आमाको गर्भबाट अलग भएको हुन्छ । बच्चा जन्मँदा रुनु उसको जीवनको संकेत हो। जब बच्चा जन्मेपछि पहिलो पल्ट रुन्छ ,यो थाहा छ कि उसको फोक्सो र मुटुले काम गरिरहेको छ। बच्चाको रुवाईले उसको स्वास्थ्यको स्थिति पनि थाहा हुन्छ । यदि बच्चा ठुलो स्वरले रुन्छ भने, यसको मतलब ऊ स्वस्थ छ। यदि बच्चा एकदम सुस्त आवाजमा रुन्छ भने, उसको स्वास्थ्यमा केहि समस्याहरू हुन सक्छन्।
शिशु रुनुको कारण
नवजात शिशु जन्म लिनु भन्दा पहिलेसम्म गर्भनालद्वारा सास फेर्छ । तर जन्म लिएको केहि सेकेन्ड पछि बच्चाले आफैं सास फेर्न थाल्छ । जब नवजात शिशुले सास फेर्छ, नाक र मुखमा रहेको तरल पदार्थ बाहिर निस्किन्छ। यस प्रक्रियामा, बच्चा रुन थाल्छ। जब बच्चा आफैंले सास फेर्न असमर्थ हुन्छ र तरल पदार्थ बाहिर निस्किन पाउँदैन तब डाक्टरहरूले सक्सन ट्यूबको सहायताले यसो गर्छन् ।
बच्चा कति समय रुनु सामान्य हो त ?
बच्चाहरूको लालनपालनमा यो जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एक दिनमा बच्चाहरू कति रुनुपर्छ वा कति रुनु सामान्य हुन्छ भन्ने कुरा एक आमालाई थाहा हुनुपर्छ । धेरै अनुसन्धानहरूको अनुसार एक स्वस्थ बच्चाले एक दिन वा २४ घण्टामा कम्सेकम २-३ घण्टा रुनु जरूरी हुन्छ ।
नवजात शिसु ३ घण्टा भन्दा बढी रोयो भने ?
यस्तोमा विशेष हेरचाहको आवश्यक हुन्छ । यदि बच्चा ३ घण्टा भन्दा बढी रोइरहेको छ भने, डाक्टरसँग परामर्श लिनु जरूरी हुन्छ ।
बच्चा रुनुको कारण
अब सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन् प्रत्येक आमाले थाहा पाउनुपर्छ। बच्चा कति पटक रुन्छ र किन रुन्छ? सबै आमालाई यो थाहा हुन्छ जब बच्चा भोकाएको हुन्छ तब रुन्छ। तर अन्य धेरै कारणहरू हुन्छन् । यदि बच्चालाई सन्चो भएन भने पनि बच्चा रुन्छ,यस्तोमा सक्दो चाँडो डाक्टरको परामर्श लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।